အခုတလော ကျနော့် အသိတွေလာလာမေးကြတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက ကားကနေ ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ကားမောင်းနေရင်း ကားကိုရပ် တံခါးဖွင့်လိုက်တယ် ကားပေါ်ကနေဆင်းဖို့ ကားတံခါးဘောင်ကို ကိုင်လိုက်တာ ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်ခနဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ တချို့ကလည်း ကားရပ်ထားတဲ့ အချိန် ကားဘေးနားကနေ ဖြတ်သွားရင်းကားကို မတော်တဆထိမိလိုက်တာ ဖြတ်ခနဲ၊ ကျင်ခနဲ လက်ကိုဓာတ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရတယ်တဲ့။
အမြဲတမ်းကြီးလည်း ဖြစ်မနေဘူး၊ တစ်ခါတစ်ခါ ဓာတ်လိုက်သလိုဖြစ်တယ်၊ ဓာတ်လိုက်လားဆိုပြီး သေချာ ကိုင်ကြည့်တော့လည်း အဲဒီလိုဆို ဓာတ်မလိုက်တော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး လာလာမေးကြပါတယ်။
ကျနော်တို့စီးနေတဲ့ကားတွေမှာပါတဲ့ Battery ကြောင့် ဓာတ်လိုက်တတ်သလား?
ကျနော်တို့ ကားလေးဈေးကွက်မှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေက 12V DC (Direct Current) Battery ကို အသုံးပြုထားတာများပြီး ပုံမှန်ဆို ဒီ 12V Battery က ဒါမျိုး ဓာတ်လိုက်လေ့မရှိပါဘူး။ အခြားဓာတ်လိုက်ပြီး လူကိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ Hybrid Battery သုံးကားတွေတော့ရှိပြီး ဒီ Hybrid စနစ်ကလည်း လူကို အန္တရာယ်မရှိအောင် သေချာစနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားတာမို့ ဒီအတိုင်းကားမောင်းသူ ကားစီးသူတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာ ဓာတ်လိုက်စေတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် ကျနော်တို့ လက်ရှိ မောင်းနေတဲ့ ကားတွေမှာပါရှိတဲ့ Battery တွေကြောင့် လူကိုဓာတ်လိုက်မှု မရှိသလောက်ရှားပါးပါတယ်။
ဒါဆို ကားမှာပါတဲ့ ဘာက ဓာတ်လိုက်စေတာလဲ ?
ကျနော်တို့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကားမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘတ္ထရီတွေကနေ ဓာတ်မလိုက်စေနိုင်ဘူးဆိုရင် လူတော်တော်များများကြုံတွေ့ဖူးတဲ့ ဖြတ်ခနဲ၊ ဇက်ခနဲ ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်သွားတာတွေဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာကို ကျနော်သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းပြပါ့မယ်။
တကယ်ဆို လူတော်တော်များများကြုံဖူးကြတဲ့ ကားမှာဓာတ်လိုက်စေတဲ့ အဓိကတရားခံ အကြောင်းရင်းက
တည်ငြိမ်လျှပ်စစ် (Static Electricity) လို့ခေါ်တဲ့ အရာကြောင့်ပါပဲ။
ကျနော်တို့လက်ရှိ Electrical နဲ့ Electronic လောကမှ အဓိက အသုံးပြုနေတဲ့ လျှပ်စစ် (Electricity) က နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
Static Electricity (တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်)
Current Electricity (or) Dynamic Electricity (ရွေ့လျား လျှပ်စစ်) ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Static Electricity ဆိုတာ
Static Electricity ဆိုတာ ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ DC (Direct Current) ဥပမာ ကားဘတ္ထရီအိုး၊ AC (Alternating Current) ဥပမာ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်တို့လို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ရွေ့လျားသွားတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကောင်က တစ်နေရာထဲမှာ တည်ငြိမ်ပြီး ပွားများစေတတ်တဲ့ သဘောဆောင်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်တမျိုးပါ။ လူလိုပြောရရင် အုံ့ပုံးချစ်လိုမျိုး တစ်နေရာထဲမှာစုစည်းနေပြီး ရုတ်တရက် မထင်မှတ်တဲ့အချိန် ထထွက်တဲ့အတွက် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နဲ့ အန္တရာယ်ရှိတတ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်မျိုးပါ။
ဒီလျှပ်စစ်အကြောင်းမရှင်းပြခင် လူတွေအရာဝတ္တုတွေနဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ကအရာမှန်သမျှမှာရှိတဲ့ Atom (အက်တမ်) ဆိုတဲ့ အရာအကြောင်းအရင်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လက်ရှိမြင်နေသမျှ ထိတွေ့နေသမျှ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းမှန်သမျှဟာ Atom (အက်တမ်) ဆိုတဲ့အရာဝတ္တု အမှုန်သေးသေးလေးတွေ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Atom (အက်တမ်) ဆိုတဲ့အရာကို ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်ရင်တော့ အောက်ပါ အရာသုံးခုနဲ့ Atom ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာ မြင်ရပါတယ်။
Atom ကိုကြည့်လိုက်ရင် အက်တမ်ရဲ့အလည်မှာ Proton (+) Positive Charge နဲ့ Neutron တို့တည်ရှိပြီး Electron (-) Negative Charge တွေက အပြင်ကနေ ဝန်းရံလည်ပတ်နေတာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Static Electricity တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သလဲ?
Static Electricity တွေက Dynamic Electricity (AC and DC) လျှပ်စစ်တွေလို တစ်နေရာကနေတစ်နေရာ မရွေ့လျားနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ စဉ်းစားဖို့ရှိလာပါတယ်။ Static Electricity ဆိုတဲ့ တည်ငြိမ် လျှပ်စစ်တွေအဖြစ်များဆုံးအကြောင်းအရင်းက အရာဝတ္တုတွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုပွတ်တိုက်ရာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်တဲ့။ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ ကစားဖူးကြပါမယ်။ ပေတံလေးကို အဝတ်နဲ့ပွတ်ပြီးရင် စက္ကူအမှုန်အစလေးတွေကို အဝတ်နဲ့ပွတ်ထားတဲ့ ပေတံနဲ့ထိလိုက်ရင် စက္ကူအစလေးတွေက ပေတံမှာလာကပ်တာ မြင်ဖူးကြုံဖူးကြမှာပါ။ နောက်ထပ်ပူဖောင်းကို ဆံပင်နဲ့ ပွတ်တိုက်လိုက်ရင် ပူဖောင်းကနေ ဆံပင်ကို ဆွဲငင်တာမျိုး၊ ဖန်ချောင်းကိုအဝတ်နဲ့ပွတ်ပြီး လက်က အမွှေးလေးတွေနားကပ်လိုက်ရင် လက်ကအမွှေးလေးတွေ ထောင်လာတာမျိုးတွေ စမ်းသပ်ကြည့်ဖူးကြရင် အဲဒါ Static Electricity ပါပဲ။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အရာဝတ္တုတွေဟာ Atom တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင် အဲဒီအရာဝတ္တုတွေမှာရှိတဲ့ Electron နဲ့ Proton တွေရဲ့အရေအတွက်ဟာ တူညီပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအရာဝတ္တုတွေကို ပွတ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တိုက်ရာကနေ အရာဝတ္တုတွေမှာ တည်ရှိနေတဲ့ Electron (-) နဲ့ Proton (+) တို့ဟာ အရာဝတ္တု နှစ်ခုရဲ့ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး (Electron) တွေ တိုးလာတာ၊ (Proton) တွေ တိုးလာတာတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အဲဒီလို တိုးပွားလာတဲ့ Electron နဲ့ Proton တွေဟာ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ် (Static) ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်နေရာကနေတစ်နေရာကို မစီးဆင်းနိုင်ဘဲ တိုးလာတဲ့နေရာမှာပဲ အဆမတန်များပြားလာပြီး အခြားမျိုးမတူတဲ့အရာဝတ္တုတွေမှာရှိတဲ့ Electron နဲ့ Proton တွေနဲ့ နီးကပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ မျိုးတူခြင်းဆိုတွန်းကန်တာတွေ ၊ မျိုးမတူတာဆိုဆွဲငင်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ။
အဲဒီလို အရာဝတ္တုတွေပွတ်တိုက်မှုကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Proton နဲ့ Electron တွေ တစ်နေရာကနေ အခြားအရာဝတ္တုဆီကို ခုန်ကူးသွားတာကိုတော့ Discharge ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို Discharge ဖြစ်တာကြောင့် ကျနော်တို့ကားတွေမှာ ဆတ်ခနဲ၊ ကျင်ခနဲ ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်ရတာပါပဲ။
သေချာရှင်းပြရရင် ကျနော်တို့ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် ကျနော်တို့ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီရယ်၊ ကားထိုင်ခုံတွေရယ်ပွတ်တိုက်ပြီး Electron တွေက ကျနော်တို့ခန္ခာကိုယ်မှာ စုစည်းမိနေမယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ကျနော်တို့မောင်းနေ စီးနေတဲ့ကားမှာလည်း လေထုနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် အခြားဆန့်ကျင်ဖက် Proton တွေ စုစည်းမိနေမယ် အဲဒီလို စုစည်းမိနေတဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်လျှပ်စစ်အားတွေကလည်း ကားတာယာတွေက လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်ကိုမှမထွက်နိုင်ဘဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပေါ်နေမယ်။ အဲဒီလိုအချိန် ကျနော်တို့ကားတံခါးဖွင့် အပြင်ထွက်လိုက်ပြီး ကားဘော်ဒီမတော်တဆ ထိလိုက်မိတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာစုမိနေတဲ့ Electron တွေရယ်၊ ကားဘော်ဒီမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Proton တွေရယ် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အသည်းအသန်ခုန်ထွက်ဆွဲငင်ကုန်ပြီး ကျနော်တို့ခံစားရတဲ့ ကျင်ခနဲ ဓာတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါပဲ။
ကျနော်တို့ဝတ်ထားတာ ပုံမှန်ချည်ထည်အဝတ်အစားထက် သိုးမွှေးအင်္ကျီ ၊ နိုင်လွန် အင်္ကျီတွေမှာဆိုရင် ပွတ်တိုက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး Electron တွေအလွယ်တကူ ပိုမိုစုစည်းမိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲကားမောင်းနေတဲ့အချိန် ရာသီဥတုက ပူနွေးတဲ့ရာသီဥတုမှာဆိုရင် စိုထိုင်းတဲ့ရာသီဥတုထက် ဆန့်ကျင်ဖက် လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေကားမှာ ပိုမိုစုစည်းမိနိုင်ပြီး အဲဒီနှစ်ခု မတော်တဆသွားတွေ့တာနဲ့ ကျနော်တို့တွေ ကားကဓာတ်လိုက်တယ်ဟဆိုပြီး ဖြစ်ကုန်ရတာပါပဲ။
လျှပ်စီးလက်တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားတဲ့ Static Electricity ပါ
သိသာထင်ရှားတဲ့ Static Electricity ရဲ့ ပြင်းထန်အားက လျှပ်စီးလက်တာနဲ့ မိုးကြိုးပစ်တာတွေပါပဲ။ လျှပ်စီးလက်တယ်ဆိုတာ တိပ်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ Electron (Negative Charge) တွေ အဆမတန် များပြားလာပြီး မြေပြင်မှာရှိတဲ့ Positive Charge တွေနဲ့ အချင်းချင်းဆွဲငင်ပြီး Spark တွေဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးပါပဲ။ တိမ်တိုက်အချင်းချင်း မျိုးတူတွေ တွန်းကန်တာ၊ မျိုးမတူတွေဆွဲငင်ရာကနေလည်း လျှပ်စီးလက်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ လျှပ်စီးလက်တဲ့အချိန် လျှပ်စီးလမ်းတွေမှာရှိတဲ့ ယေဘုယျ Voltage အားက 100 Million ကနေ 1 Billion အထိရှိပြီး 10,000 ကနေ 200,000 Amp အထိ Current စီးဆင်းမှုနှုန်းရှိတယ်လို့ လေ့လာသိရှိရပါတယ်။
Static Electricity ကြောင့် ကားတွေ ဘယ်လို အန္တရာယ်ရှိနိုင်သလဲ?
Static Electricity က မြင်သာထင်သာတဲ့ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်မဟုတ်ဘဲ ကားတွေကို ရုတ်တရက် ဒုက္ခပေး တတ်ပါတယ်။ ခုအပေါ်မှာပြောသလို မတော်တဆကျင်ခနဲ ဓာတ်လိုက်တာမျိုးက စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာဖြစ်ပေမဲ့ အန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီလို ရုတ်တရက် Electron တွေနဲ့ Proton တွေ ရုတ်တရက် Discharge ဖြစ်ပြီး Spark ခတ်တာမျိုးက ဘယ်နေရာအန္တရာယ်ရှိနိုင်သလဲဆိုရင်တော့ ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေမှာ ဆီဖြည့်နေတဲ့အခါမှာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဆီဂေါက်နဲ့ ဆီတိုင်ကီအဝနဲ့ ပွတ်မိပြီး မီးထလောင်တယ်ဆိုတာတွေ ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်က အဲဒါ Static Electricity တွေ Discharge ဖြစ်ပြီး လေထဲမှာ အငွေ့ပျံနေတဲ့ ဓာတ်ဆီနဲ့တွေ့ပြီး မီးထလောင်ကျွမ်းစေတာမျိုးပါ။
နောက်တစ်ခုက ဆီသယ်တဲ့ ဆီဘောက်ဆာကားကြီးတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာပါ။ ဆီသယ်တဲ့ ဘောက်ဆာကားကြီးတွေမှာ ဆီသယ်ပြီး သိုလှောင်ကန်ထဲထည့်တယ်၊ ထုတ်တယ် လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဆီတွေဟာ ပိုက်လိုင်းထဲမှာ ရွေ့လျားရတာမို့ ဆီနဲ့ ပိုက်လိုင်းပွတ်တိုက်ပြီး Electron တွေ Proton တွေတည်ဆောက်တာရယ်၊ ကားဘော်ဒီစုနေတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်သိုလှောင်လျှပ်စစ်တွေ မတော်တဆဆုံတွေ့ပြီး ဒီလို Static Electricity Discharge တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှောင်ရှားနိုင်ဖို့၊ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်တွေစုစည်းတာကို ရှောင်ရှားဖို့၊ ကားဘော်ဒီနဲ့ မြေပြင်ကို Ground ချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုချပေးထားမှ ကားဘော်ဒီမှာစုနေတဲ့ တည်ငြိမ်လျှပ်စစ်တွေက မြေကြီးထဲဆင်းသွားပြီး မတော်တဆ Discharge ဖြစ်တာကို ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အခု YBS ကားတွေမှာရှိတဲ့ Foton ကားကြီးတွေနောက်မှာ မြေကြီးကို ပွတ်တိုက်နေတဲ့ ကြိုးတန်းလန်းလေးချထားတာဟာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ကားဘော်ဒီမှာ တည်ဆောက်လာနိုင်တဲ့ Static Electricity တွေကို မြေပြင်ထဲကို Ground ချပြီး ကာကွယ်ထားတဲ့ သဘောပါပဲ။
မိတ်ဆွေတို့ကားမှာ ဒီလို ကျင်ခနဲ ဓာတ်လိုက်မှုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ ?
ကားထဲကထွက်ပြီး ကားဘော်ဒီနဲ့ထိတိုင်း ဒီလိုကျင်ခနဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကားထဲကမထွက်ခင် ကားထိုင်ခုံကနေမထဘဲ ကားသံဘော်ဒီကိုကိုင်လိုက်တာက Potential Discharge ဖြစ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ကားကနေ Static Electricity Discharge ဖြစ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အကြွေစေ့ (ဒါမှမဟုတ်) သံထည်ပစ္စည်းလေးတွေဆောင်ထားပါ
ကားပေါ်က ဆင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ကားဘော်ဒီကို အကြွေစေ့လေး ဒါမှမဟုတ် သံထည်ပစ္စည်းလေး တစ်ခုခုနဲ့အရင်တို့လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကားဘော်ဒီမှာစုနေတဲ့ Electron (or) Proton တွေက အကြွေစေ့လေးဆီကို ခုန်ကူးသွားပြီး သင့်ကို ဓာတ်လိုက်စေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Microchip တွေပါတဲ့ ကားသော့တွေနဲ့တော့ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ Static Electricity Shock က မိုက်ခရိုချစ်တွေကို ပျက်စီးစေတတ်ပါတယ်။
ကားမှန်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ကိုင်ပြီးမှထွက်ပါ
ကားမှန်ကို စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ကိုင်ထားပြီးမှ ကားထဲက ထွက်ရင်လည်းရပါတယ်။ ကားမှန်က လျှပ်ကာပစ္စည်းဖြစ်တာမို့ Discharge ဖြစ်တာကို သက်သာစေပြီး ကားဘော်ဒီလိုမျိုး ကျင်ခနဲ စူးခနဲဖြစ်တာကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံတွေကို ချောစေနိုင်တဲ့ ဆေးရည်များဖြန်းပေးပါ
ထိုင်ခုံ အခင်းတွေကို ကြမ်းတမ်းမနေစေဘဲ ချောမွတ်စေနိုင်တဲ့ ထိုင်ခုံဖြန်းဆေးရည်မျိုးတွေ ပက်ဖြန်းပေးပါ။
အမြဲဝတ်ဆင်တဲ့ အဝတ်အစားကို ဂရုစိုက်ပေးပါ
ကားမောင်းတဲ့အချိန် အမြဲဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကလည်း ကားထိုင်ခုံနဲ့ ပွတ်တိုက်ပြီး Static Electricity တွေဖြစ်စေဖို့ အားပေးနိုင်တာမို့ အမြဲဝတ်ဆင်တတ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။ သိုးမွေးနဲ့ နိုင်လွန်ချည်ထည်တွေက Static Electricity ဖြစ်စေဖို့ ပိုမိုအားပေးတတ်ပါတယ်။
Ground Strap ဆိုတာမျိုးကားမှာတပ်ဆင်ပေးပါ
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေလုပ်ရဲ့သားနဲ့ မကြာခဏ ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်ခနဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကားဘော်ဒီနဲ့ မြေကြီးကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ Ground Strap ဆိုတာလေးတပ်ဆင်ထားပေးပါ။ ဒီလိုတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ကားဘော်ဒီမှာ စုစည်းလာနိုင်တဲ့ Static Electricity တွေကို မြေကြီးထဲဆင်းသွား စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာ အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မတော်တဆ ကျင်ခနဲ၊ စူးခနဲ ဓာတ်လိုက်တာကအစ ကားမီးလောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအထိ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ Static Electricity Discharge ဖြစ်တာတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ အားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။